पोखरा । नेपाली माटोमाथिको भारतीय हस्तक्षेप र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणबिरुद्ध पोखरामा जनवादी गीत र उन्मुक्त कविता गुन्जिएका छ्न ।
आइतबार साझँ पोखराको सिर्जना चोकमा संगम सांस्कृतिक मंच, नेपालले उन्मुक्त पुस्तासंग मिलेर गीत र कविता मार्फत भारतीय हस्तक्षेपबिरुद्ध पोखरेलीलाई जुरुक्कै उचाले । संगम सांस्कृतिक मंचका कलाकारहरुले गीत मार्फत देशको कुटननीतिलाई राजनीतिमा मौलाएको अनैतिकताले कमजोर बनाएको भन्दै यो बेला देश एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिए ।
"खोइ हाम्रो जङ्गे पिलर सिमाना सार्‍यो ढालेर"
यो गीतले उपस्थिति दर्शकहरुलाई जुरुक्क उठायो । "हिजो राति आफ्नै घरमा सुतेको नेपाली" गीतले सीमानामा बसेकाको जन जीवन अझै कठिन र भयपूर्ण भएको कथा बोल्दै कलाकारहरुले आधा दर्जनभन्दा बढी गीत सुनाए ।
मंचका अध्यक्ष काजी गाँउली यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई प्रयोग गरेर राजनीतिमा स्थान बनाउन खोज्नेहरुले देशलाई झनै घात गर्ने भएकाले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणबिरुद्ध सबै नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने बताए ।
कलाकारहरू सङ्गम सांस्कृतिक मंच नेपालका अध्यक्ष काजी गाँउले , उपाध्यक्ष चियाङ चुङ तमु, सचिव विकास लुङ्गेली, डी. बी. बान्तवा, रोशन लामा, खेम लामा, सन्तोष बलम्पाकी, ओम बिक्रम ओझा लगाएको टोलिले ८ वटा जनबादी गीत संगीत प्रस्तुत गरेका थिए ।
यता उन्मुक्त पुस्ताले आयोजना गरेको सडक कविता आन्दोलनमा उन्मुक्त कविका उन्मुक्त कविता पनि गर्जिए। कवि 'रोशन तिमील्सिना'ले कविता "सिमाना हराएको देश"बाट कब्जा गरिएका सिमानाका कुरा उठाए।
काव्यिक विम्वमा एउटा पागल मान्छेले आफ्नो सुर नखोजेर भएपनि आफ्नो देश र सिमाना खोजिरहेको उनको कविताले बोलेको थियो ।
"नेपाली हौँ धन जति नहोस् बेच्दिनौँ स्वाभिमान
यौटै गल्ती छ तर नि सबै त्यै सुगौली नठान
कालापानी टनकपुरमा बीस फेरा दुखायौ
भोग्नै पर्ला फल त निँदको सिंहलाई ब्युँझायौ" ।
कवि 'परिविक्रम'को कविताअंशमार्फत लिम्पियाधुरी, कालापानी, सुस्ता, टनकपुर लगायत हाम्रै भएको र हामी सुतेका सिंह थियौ, अब ब्युझियौ भन्दै खबरदारीका स्वर बोले ।
त्यसैगरी कवि 'तारानाथ पराजुली' आफ्नो कविता "भन्द्यौ छिमेकीसित" मार्फत हाम्रो इतिहास वीर गोर्खालीको भएको र हाम्रो भूभाग, संस्कृति, सार्वभौमसत्तामाथि दावा बोल्न खोजे उल्टै छिमेकीले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ला भनेर छिमेकीलाई भन्दिन अनुरोध गरेका थिए ।
संचारकर्मी, कवि एवम् उन्मुक्त कवितावाचन कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश अधिकारीले पनि आफ्नो कविताबाट सीमा अतिक्रमण र हाम्रो देश माथिको कुदृष्टि सह्य नहुने बोलेका थिए ।
त्यसैगरि कवि गीता तिवारी र ओमबिक्रम ओझाका कविताले पनि कालापानी, लिम्पियाधुरी, लिपुलेक हाम्रो भएको, यसमाथि हाम्रो हक छ । सत्तामा र प्रतिपक्षमा बसेका, सदनमा बसेकाको केही गल्तीले यस्तो अवस्था भोग्नु परेको आक्रोश व्यक्त गर्दै सच्चिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा संचारकर्मी, सांस्कृतिक कर्मी, कवि, समाजसेवी तथा सर्वसाधारणहरूको उपस्थिति रहेको थियो । अन्तमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरी हाम्रो हो, भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद जस्ता नारा पनि लगाइएको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण सुरज उपाध्यायले गरेका थिए ।
सारङ्गी न्युज डट्कम मिडिया पर्टनर रहेको थियो भने नेपाल प्लस टिभीले भिडियो सौजन्य गरेको हो ।
आगामी शुक्रबार तनहुँको दुलेगौंडामा शुक्ला साहित्य सङ्गमसँगको सहकार्यमा गरिने ।
सोमवार, कार्तिक २५, २०७६, ०३:११:००